Fifandraisana: Sehatra ho an'ny GNU / Linux Operating Systems | Avy amin'ny Linux
Fifandraisana: Sehatra ho an'ny Rafitra fiasa GNU / Linux
Sehatra fifanakalozan-kevitra vondrona ho an'ny GNU / Linux
Ny fampiasana ny fitaovana misy amin'ny alàlan'ny olombelona mba hifandraisana, hampiala voly ary hananana vaovao hatrany, toy ny Radio, TV ary ny Internet dia zava-dehibe indrindra amin'ny hetsika mitovy amin'izany. Ary amin'ny Internet, Ny fampiasana mafy ny haino aman-jery sosialy na vondrona liana dia mitaky ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny fampiharana izay mamela ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny fifandraisana faobe na vondrona.
Raha misy ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux, misy ny sehatra fifanakalozan-kevitra vondrona izay manamora ny fifandraisana amin'ny olona na vondrona toa izany, amin'ny fomba isan-karazanyizany hoe manoratra / mamaky, feo na horonan-tsary. Ary amin'ity boky ity dia hiresaka momba ny sasany manan-danja indrindra sy ampiasaina izahay.
1 Fampidirana ireo fampiharana amin'ny fifandraisana
2 Fampiharana amin'ny fifandraisana
2.19 boaty onja
Fampidirana ireo fampiharana amin'ny fifandraisana
Ny rindranasa na ny sehatra fifandraisana dia nanamora sy nampitombo ny fifandraisan'ny isam-batan'olona na ny vondrona iray tena ilaina amin'ny alàlan'ny famelana ny fifandraisana mahomby sy mahomby eo amin'izy ireo avy amin'ny toerana rehetra eto ambonin'ny planeta amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Internet ara-potoana amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana maro.
Amin'ny teny ankapobeny, ny rindranasa rehetra na ny sehatry ny fifandraisana dia manamora ny fiainana isan'andro satria mampihena ny halaviran-toerana ary mampihena ny fotoana famaliana., fa izy ireo kosa dia mitaona ny kolontsaina sy ny fomba fitondran-tenan'ny zanak'olombelona, ​​indrindra ny tanora noho ny fitaoman'ireo tambajotra sosialy sy ny fampiasana Internet.
Fampiharana amin'ny fifandraisana
Ny rindranasa na ny sehatra fifandraisana dia fomba azo ampiasaina be mpampiasa mba hampitomboana ny haavon'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny Internet ho an'ny maro eran'izao tontolo izao. Ny rindranasa aseho etsy ambany dia ny sasany amin'ireo tena be mpampiasa indrindra miaraka amin'ny fanohanan'ny teratany (mpanjifa amin'ny birao) ho an'ny GNU / Linux Operating Systems:
Sehatra fifandraisana maoderina sy ahazoana aina mamela: chat, vondrona, fantsona, antso am-peo ary fanekena feo. Izy io dia manana interface mora ampiasaina ary mifanaraka amin'ny chatbots. Namboarina manokana hampiasaina ao fitaovana samihafa mifantoka amin'ny sehatry ny orinasa, manana fampiasa azo ampiharina maro izy io.
Izy io dia fampiharana fifandraisana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na feo, amin'ny fomban'ny «WhatsApp». Nipoitra toy ny fampiharana fifandraisana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na feo ho an'ny vondrom-piarahamonina gamer (vondrom-piarahamonin'ireo gamer), amin'ny alàlan'ny fanehoana ny fahaizany mifampiresaka haingana, miaraka amin'ny fiarovana manokana, ary avela hanokatra mpizara / fantsona (vondrona) ahafahan'izy ireo mifanerasera mpampiasa maromaro am-pilaminana ary ambonin'izany rehetra maimaim-poana.
Fampiasa amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra ofisialin'ny Facebook izy io, izay ahafahanao manomboka resadresaka an-tsoratra eo amin'ny fifandraisana (namana) ao amin'ny tambajotra sosialy Facebook. Io dia ahafahanao mandefa sy mandray hafatra an-tsoratra, mamela anao hizara sary na ny toerana misy anay koa ao anatin'ny hafatra an-tsoratra, afaka manampy mpandray maro sy manokatra varavarankely an-tserasera amin'ny olona maro miaraka aza. Ny zavatra tanterahin'ity client desktop ity dia azo jerena amin'ny fomba hafa ao anatin'ny tambajotra sosialy.
Izy io dia mpanjifa multiplatform, maimaimpoana ary loharano misokatra izay miasa miaraka amin'ny Instant Messaging (IM, amin'ny teny Anglisy), feo sy horonan-tsary amin'ny Internet. Miara-miasa amin'ny maro amin'ireo protokolan'ny Internet Messaging sy Telephony malaza indrindra izy io, ao anatin'izany ny Jabber / XMPP sy ny SIP Voice over IP (VoIP), sns. Izy io dia miasa miaraka amina encryption tsy miankina fanampiny ho an'ny IM amin'ny alàlan'ny protokol OTR (Off-the-Record) ary ho an'ny fivoriana am-peo sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny ZRTP sy SRTP.
Mpanjifa Multiplatform izay mampiasa ny protokol SIP mahazatra ho an'ny fifandraisana VoIP ary nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU GPL. Ho an'ny GNU / Linux, ny interface-dia novolavolaina niaraka tamin'ny GTK +, ary azo tanterahina amin'ny maody console ihany koa izy io. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny protokol ITSP ary mamela ny fifandraisana amin'ny feo, horonan-tsary ary hafatra an-tsary maimaimpoana.
Izy io dia rindran-damina am-peo open source, miavaka amin'ny latency ambany sy kalitao avo lenta, natao indrindra hampiasaina amin'ny kaonferansa video na fihaonambe mandritra ny fotoam-pivoriana ho an'ny lalao na fivorian'ny asa, toy ny dinidinika. Mumble dia rindrambaiko maimaimpoana, noho izany dia maimaim-poana izy ary manana fahazoan-dàlana tena miovaova.
Izy io dia sehatra fifandraisana an-tsary, horonan-tsary ary fifampiresahana azo antoka sy voazara izay tsy mila mpizara afovoany ary mamela ny herin'ny tsiambaratelo eo am-pelatanan'ny mpampiasa. dia lozisialy misokatra ho an'ny fifandraisana izay mamela ny mpampiasa azy hanao antso an-tsary na horonan-tsary ary handefa hafatra am-pilaminana sy malalaka, am-pitokisana. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny serivisy an-tariby mahazatra na ampiarahina amin'ireo fitaovana finday mifandray.
Riot dia mpanjifa Internet Messaging Client izay mamela ny fifandraisana amin'ny sehatra fifandraisana natsangana tamin'ny fenitra misokatra Matrix.org, izay mamela ny fifandraisana amin'ny mpampiasa sy ny efitrano fifampiresahana amin'ny rindranasa rehetra mifandraika amin'ny sehatra Matrix, toy ny IRC sy Slack, ary ny mpanjifa rehetra mifanaraka amin'ny Matrix. Noho izany, ny Riot dia teboka fidirana amin'ny tontolo iainana ekena manerantany sy misokatra tanteraka. Misaotra ny maritrano itsinjaram-pahefana nolovaina tamin'ny Matrix, sy ny fanohanany ny enkripsi end-to-end, i Riot dia miezaka ny hanafoana izany ahiahy izany ary hanao ny fiainana manokana ho fiainana manokana. Riot dia loharanom-baovao misokatra ary ahafahany manavao haingana kokoa, manovaova bebe kokoa ary mifehy ireo izay te hanara-maso, hanitatra kaody ary handray anjara amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika.
Ity sehatra ity Soso-kevitra open source tsotra nefa mahery manana mpanjifa Desktop multiplatform izay manolotra fitaovana sy fiasa isan-karazany tena tsara. Anisan'ireo mampiavaka azy ny mampifanitsy azy tsara, mamela ny Live Chat, Videoconferencing, fizarana rakitra, solontenan'ny Tex Math ary fizarana lamba eo amin'ireo mpampiasa.
Izy io dia sehatra fifanakalozan-kevitra vondrona izay mamela ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy eo amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa iray, mamela azy ireo hametaka antontan-taratasy ary na dia ny resaka manokana aza, mba tsy hisy singa ivelany hanelingelina ilay ekipa izay miasa amin'ny fomba mifandrindra, mamela ny soritry ny hetsika rehetra . Izy io dia tahiry tsy misy farany izay azo idirana raha vantany vao vita ilay tetikasa ary avereno jerena ireo firaketana, hafatra, inona no tsy nety ary inona no nety.
Izy io dia fampiharana multiplatform izay ahafahan'ny tsirairay mifampiresaka, amin'ny alàlan'ny fahazoana kaonty mailaka an'ny orinasa Microsoft (Outlook, Hotmail, ankoatry ny hafa), manao antso maimaim-poana sy antso an-tariby sy antso an-tarika ary fandefasana hafatra. miaraka amin'ireo olona mampiasa Skype. Maimaimpoana ny misintona ary mora ampiasaina, ankoatr'izay, ny fandoavana kely dia ahafahanao miantso telefaona sy mandefa hafatra SMS.
Izy io dia sehatra fifandraisana izay mamela, amin'ny alàlan'ny mpanjifan'ny birao multiplatform, hanatanteraka fifampiresahana am-peo amin'ny Internet (IP), ahafahan'ny mpampiasa miresaka amin'ny fantsona iray amin'ireo mpampiasa hafa, toy ny amin'ny programa toa an'i Skype. Ny Client TeamSpeak dia maivana kokoa noho ireo mitovy aminy ary manana andian-dahatsoratra ahafahana miresaka, mijery zavatra, ankoatry ny zavatra hafa. Fitaovana hafa atolotray antsika ity programa ity dia ny ahafahantsika mamorona fantsona vonjimaika miaraka amin'ny teny miafina ary afaka miditra amin'ireo olona tiantsika horesahina. Izy io dia manana fepetra fiarovana lehibe, mamela ny famindrana rakitra, manana fiasan-dresaka an-tserasera izay mamela ny fifandraisana mora amin'ny URL sy data hafa.
Izy io dia sehatra fifandraisan-davitra izay mamela amin'ny alàlan'ny mpanjifan'ny birao multiplatform izay mamela, toy ny maro hafa fandefasana hafatra an-tsoratra avo lenta, sary, horonan-tsary, antso an-tsary sy horonan-tsary, fanamarihana marika, fandefasana rakitra GIF sy ny sticker-pireneny malaza. Izy io dia rindranasa iray ihany koa izay ho afaka maimaim-poana, satria aingam-panahy avy amin'ny loharano misokatra, izay mahatonga ny lampihany ho azo antoka tokoa noho ny enkripsi mahery sy ny fotony cloud.
Izy io dia rindranasa izay ampifandraisan'ny mpanjifan'ny birao mpampiasa azy amin'ny filaminana sy tsiambaratelo lehibe, izany hoe, miaraka amin'ny taha ambony izay tsy misy mihaino na miditra an-tsehatra amin'ny serasera. Raha misy serivisy mendri-kaja hafa aloa amin'ny haavon'ny kalitao mitovy, maimaimpoana tanteraka i Tox ary tsy misy doka mandritra ny fiainana. Tox dia tetikasa FOSS (Maimaimpoana ary loharano misokatra). Loharano misokatra izy io ary misokatra ihany koa ny fampandrosoana rehetra, novolavolain'ny mpamorona mpilatsaka an-tsitrapo mandany fotoana malalaka amin'izany, ka tsy misy orinasa na fikambanana ara-dalàna hafa ao ambadik'izany.
Izy io dia rindrambaiko fampitaovana multiplatform izay manana karazana antso sy hafatra fandefasana hafatra, izay mamela ny safidy tsy manam-petra ho an'ireo mpampiasa azy haneho ny heviny hatramin'ny fetrany. Mamela ny fandefasana lahatsoratra, sary, horonan-tsary, antso an-tsary sy horonan-tsary avo lenta, ny fanamarihana sy ny fandefasana ireo rakitra GIF ho an'ny fifandraisana tena izy, mampiala voly ary maneho hevitra. Izy io koa dia mamela ny famoronana vondrom-piarahamonina (vondrona) hanamorana ny fikirakirana ny resaka miaraka amina mpikambana tsy voafetra, ary ny famafana ny hafatra amin'ireo zavatra maro hafa.
Misy sehatra hafa misy na tsy misy mpanjifa amin'ny birao ho an'ny GNU / Linux na Multiplatforms izay mety mahasoa arakaraka ny takian'ny fifandraisana aminao, toy ny:
Manasa anao aho hisintona, hanandrana ary hampiasa ny sasany hanatsarana ny haavon'ny serasera, ny filaminana, ny fiainana manokana ary ny fiononana amin'ny Internet. Ary raha mitady sokajy fampiharana hafa ianao ho an'ny GNU / Linux Operating System anao, dia jereo amin'ity lahatsoratra bilaogy hafa ity ihany koa: Fampiharana tena ilaina sy manan-danja amin'ny GNU / Linux 2018/2019
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fifandraisana: Sehatra ho an'ny Rafitra fiasa GNU / Linux
I Miguel Mayol Tur dia hoy izy:
Misaotra fa ,,,
Tiako bebe kokoa raha nanao fizarana roa ianao, ny iray voalohany miaraka amin'ireo rindranasa FOSS ary ny iray faharoa miaraka amin'ireo manana anao, ary amin'ny farany ny latabatra mampiavaka azy.
Izay soratanao momba ny RING ao amin'ny fehintsoratra farany dia tsy takatra tsara, heveriko fa tsara kokoa ny nanoratana an'ity:
Azonao atao ny manefy ny laharan-tariby IP asanao ao aminy - raha anananao izany - amin'ny alàlan'ny fiantsoana na famaliana avy amin'izay tianao, miaraka amin'ny laharan-tariby ao amin'ny latabatrao miaraka amin'ny taha nahena na / na fanamboarana mpampiasa iray, ahafahanao miantso telefaona IP efa fantatra ireo fifandraisana hafa amin'ny alàlan'ny Internet.
Ny fahazoana antso an-tariby fisaka avy amin'ny laharana raikitra amin'ny finday, ary koa ny fiantsoana avy amin'ny finday amin'ny fampiasana ny laharan-tariby misy ny orinasa miaraka amin'ny taha mihena ho azy, dia tsy vita be loatra, fa io dia iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny telefaona IP mbola tsy voakitika. Mandrak'izao.
Valiny tamin'i Miguel Mayol i Tur
Misaotra tamin'ny hevitrao! Mazava ho azy fa ny fomba fizarana ny atiny ho amin'ny famoahana 2 dia tsy ho ratsy velively, mampijaly ahy ny tsy niheverako an'izany.
Na dia ny hevitra fotsiny dia tsy tokony hotononina afa-tsy amin'ny abidia abidia ny sasany amin'ireo be mpahalala ary ny hafa tsy dia be loatra, eo amin'ny sehatry ny fifandraisana.
Ary ny momba an'i Ring dia tsara tokoa izay nampiana. Na izany na tsy izany, efa misy lahatsoratra tsara ao amin'ny Ring on the Blog. Manasa anao aho hamaky azy io, na dia tsy dia vaovao loatra aza izany: https://blog.desdelinux.net/ring-un-sustituto-de-skype-en-gnulinux/
Mercedes Fuentes dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara! Mahagaga ny isan'ireo fandaharana misy mba hametrahana fifandraisana hentitra! Miara-miasa amiko FAMPITANDREMANA ary mitandrina izahay fa ny fikarohana sy ny fampitahana ireo rindrambaiko samihafa dia mahomby sy kendrena, noho izany dia nieritreritra aho fa tena tsara ny lahatsoratrao. Ao amin'ny tranokalanay, ankoatry ny maro amin'ireo ao amin'ny lahatsoratranao, ireo programa hafa toy ny REVE chat sy Freshchat dia voalaza fa tsara ihany koa, indrindra ho an'ny tontolon'ny orinasa. Salama.
Valiny tamin'i Mercedes Fuentes
Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara amin'ireo fampiharana 2 hafa ireo.
QOwnNotes: tonian-dahatsoratra miaraka amin'ny fanohanana ny fampifanarahana amin'ny serivisy rahona
VNote: Fandraisana an-tsoratra Markdown Fanamarihana avy amin'ny Vim